mai 2018 – filazantsaramada
NOFO SY FANAHY
« Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. » Galatiana 5:17 Noharian’Andriamanitra ny tenantsika, ary ao amin’izany tenantsika izany avokoa na ny nofo, na ny fanahy, na ny aina, na ny saina…. Samy manana ny filàny avokoa ireo. Eo amin’ity Eepistily […]
Publié parfilazantsaramada mai 25, 2018 mai 25, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NOFO SY FANAHY
« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro kosa ny toetray anaty. » II Korintiana 4:16 – Mihalevona ny toetra ivelany. Fomba fiteny ny hoe: mandalo ny fiainana eto an-tany, miserana ihany izany. Tsy maintsy mihaantitra ny momba ny tenan’ny olona rehefa mitombo ny taona iainany eto an-tany. […]
Publié parfilazantsaramada mai 18, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VILANY TANY
MAMELONA NY FANAHY MASINA
« Ary raha ny Fanahin’Izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo. » Romana 8:11 Mety maty ny tenantsika: maty isika noho ny fahotana. Hoy tokoa ny teny hoe: “Raha hoy isika: Tsy manana ota […]
Publié parfilazantsaramada mai 11, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMELONA NY FANAHY MASINA
TSY MISY FANAMELOHANA
« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1 – Ny atao hoe ao amin’i Kristy Jesosy dia ny olona nandray an’i Jesosy Kristy. Izay nahazo hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Ny olona izay ao amin’ny Fanahy dia tarihin’ny Fanahy. Raha ny zaza dia izay nandray ny Fanahy tamin’ny batisan’ny Fanahy. […]
Publié parfilazantsaramada mai 4, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY MISY FANAMELOHANA